သကြားနှင့်ဆား စားမှသိ ( ဝေဘူဆရာတော် ဘုရားကြီး )	ဒကာကြီးရဲ. သည်.လိုပြောပါမယ်၊ သကြားတို. ဘာတို.တော ဒကာကြီးက ချိုတယ်လို. ပြော
This entry was posted on December 6, 2011 by Noble Kyaw. It was filed under ဆရာတော်ကြီးများ၏ဆုံးမသြဝါဒ .	→